GOES-16 ဂြိုဟ်တုသည်ကမ္ဘာ၏ပထမဆုံးရုပ်ထွက်ပုံရိပ်များကိုပေးပို့သည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ငါတို့မျက်မှောက်၌ကြီးမားသောလောက၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်သည်၊ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားတိုက်ကြီးတစ်ခုသို့အကြိမ်ကြိမ်သွားရောက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်လေယာဉ်ပျံကိုယူပြီးခဏတာအတွင်း၌နေရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ သို့သော်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်စကြဝinာတွင်အသေးငယ်ဆုံးသောဂြိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးဖို့၊ ဂျူပီတာကဂြိုလ် ၁၀၀၀ နဲ့ကမ္ဘာနဲ့နေ ၁ သန်းလောက်တူလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်ယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်ကမ္ဘာကိုထူးခြားစေသည့်ပုံစံနှင့်အရောင်များစွာကိုယူဆောင်လာပြီးသက်ရှိများကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည် - NASA ၏ GOES-16 ဂြိုဟ်တုဖြင့်ကြည့်သည်။အချို့သောအံ့မခန်းပုံရိပ်တွေကိုစလှေတျတျောမူသော။
ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ပုံရိပ်တွင်မြင်တွေ့ရသောအာဖရိကကမ်းရိုးတန်းမှလေခြောက်သွေ့ခြင်းသည်အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဖြစ်ပေါ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ GEOS-16 ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြောက်အမေရိကသို့ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှဟာရီကိန်းများမည်သို့ပြင်းထန်လာသည်ကိုမိုးလေဝသပညာရှင်များကလေ့လာနိုင်သည်.
အဘယ်သူသည်ကာရစ်ဘီယံနှင့် / သို့မဟုတ်ဖလော်ရီဒါကိုသွား၏အိပ်မက်မမက်ပါသနည်း ဤအတောအတွင်းထိုနေ့ရောက်ရှိလာသည်ကိုသင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးပါ၊ ရေတိမ်ပိုင်းကိုပင်လေ့လာကြသည်။
ဒီပုံတွင် panel ၁၆ ခုပါ ၀ င်သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့်မြင်တွေ့နိုင်သည် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ ရေငွေ့၊ မီးခိုး၊ ရေခဲနှင့်မီးတောင်ပြာများကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်.
သူတို့ကြိုက်လား GOES-16 အကြောင်းပိုသိချင်ရင် ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ရုပ်ပုံများ » NASA ၏ GOES-16 ဂြိုဟ်တုသည်ကမ္ဘာ၏ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်မြင့်ပုံရိပ်များကိုပေးပို့သည်